Modifying Post Slugs ao amin'ny WordPress ho an'ny SEO | Martech Zone
Alarobia, Septambra 2, 2009 Alarobia, Jolay 9, 2014 Douglas Karr
Indraindray rehefa manao fikarohana teny lakile ianao rehefa mitoraka bilaogy ho an'ny fanatsarana motera fikarohana, mety ho hitanao fa maro ny mpikaroka diso ny tsipelina diso na mifangaro teny. Ohatra iray mety ho an'ny USS Forrestal mifanohitra USS Forestal.
Ny fisehoana amin'ny valin'ny fikarohana ho an'ny teny diso tsipelina dia paikady izay mandeha tsara… saingy mety tsy te-hiteny an-tsipelina diso ny teny iray amin'ny lohateninao na amin'ny atiny ianao. Tsy tapaka, misy olona hanondro ny fahadisoana ho anao!
Raha tokony ho menatra ianao dia araraoty ny toerana hafa ao amin'ny atiny raha tsy diso ny fanononana ny teny hoe:
ny Post Slug (horonantsary etsy ambany)
Ao anatin'ireo mari-pamantarana lohateny amin'ny tagants vatofantsika (rohy).
Ao anatin'ny lohateny na famaritana marika amin'ny sary.
Ity misy horonan-tsary fohy ny fomba fanovana ny posto slug amin'ny WordPress. AZA manao izany aorian'ny famoahana lahatsoratra bilaogy! Mandritra ny fotoana anoratanao ny lahatsoratry ny bilaoginao dia azonao atao ny manavao ny lahatsoratrao somary mora:
Tags: manatsarapermalinkmandefa slugslugWordPressWordPress permalink
Dummies: Referansa ho an'ny sisa amin'ny antsika!
Sep 2, 2009 amin'ny 4: 26 AM
Toa manana hery be dia be ny Camtasia. Nividy ilay logiciel ve ianao, sa manao fitsarana fotsiny?
2 Septambra 2009 à 12:42
Mahaliana fa toa tsy matanjaka toy ny dikan-teny 'studio' ho an'ny Windows izy io. Saingy tena tsotra ny fampiasana azy! Ny interface dia maka tahaka ny iMovie. Nividy azy aho tamin'ny fotoana nivoahany. Nampiasa Snap X Pro aho saingy nilaza fa lany ny famandrihana nataoko… Tsy tsapako izany dia famandrihana! Tsara kokoa izany.